University of Tokyo - Study dibadda ee jaamacadda ugu fiican ee Japan
aasaasay : 1877
Ha iloobin in aad wada hadlaan University of Tokyo
Qor at University of Tokyo
In dhexdeeda Caalamiyeynta degdeg ah, joogitaanka dhibaato in la xakameeyeen by Insi oo dhan, oo ay ku jiraan daaqa ee khayraadka dabiiciga ah, waxyeelo ku ah deegaanka, amni dhaqaale ee dunida iyo saboolnimada, ayaa noqonaya mid sii muuqda. Qabashada arrimaha caalamiga ah oo baaxad sida waxay u baahan tahay in tiro balaadhan oo ah dad wadaagaan aqoontooda iyo markii danbe u isticmaali lahaayeen aqoontooda la wadaago in ay iskaashi iyo talaabo ka qaado. Beerida shakhsiyaadka tayo leh, kuwaas oo qaadan doona hogaanka ku qaybsiga iyo isticmaalka aqoonta waa waajib ugu muhiimsan ee Jaamacadda Tokyo. Marka tan la eego, waa in aan marnaba joogsan in ay la kulmaan caqabado la sii dhiirranaaday, xigmad iyo dareen mas'uuliyadeed.
Ciidamada wadidda horumarinta xirfadlayaasha aqoonta waa, baahnayn in la yidhaahdo, barashada waa kuwa ugu fiican adduunka. Waxaan jeclaan lahaa gaar ahaan sida ardayda waxay leeyihiin qalbigooda ku qabata barashada, iyo sidoo kale cilmi-dhalinyaro ah, in ay la kulmaan ku farax iyo farxad aqoonta safka hore ee cilmi. Waxaan doonayaa inay isticmaalaan waayo-aragnimo in uu yahay il a of nafaqo caqliga in xoojinaysaa ku dhex rabitaan ay isku si weyn loo horumariyo. Waxaan aaminsanahay in ay leeyihiin Jaamacadda Tokyo adeego sidii meel-aragnimada kuwan ma aha oo kaliya la kulmi lahaa filayo ee shacabka kuwaas oo ku ammaanaystay Jaamacadda ay la taageero, laakiin sidoo kale ay gacan bulshada aadanaha oo dhan.
Tan iyo markii ay aasaaska, Jaamacadda Tokyo ayaa noqday saldhig tacliimeed ee fusing Western la dhaqamada Eastern, horumarinta nidaamo tacliinta gaarka ah ee dunida iyo gudbinta aqoonta faa'iiday ka beesha caalamka. Qaadashada dhaqanka this halka waqti isku mid ah qorshaynta mustaqbalka, Waxaan abuuri doonaa ah "saldhig caalamka iskaashiga aqoonta,"Kaas oo isku xiri doontaa baaris ah ee aqoonta leh isticmaalka aqoonta iyo soo jiidan soo diyaariyeen kala duwan ee dadka ka soo adduunka oo dhan. At salka this, Waxaan jeclaan lahaa in la horumariyo nidaamo cusub oo waxbarasho oo in laga gudbo qaran, xuduudaha dhaqanka iyo jiilal iyo ajende meelaha jira ee waxbarasho loo yaqaan aadanaha iyo cilmiga ah. Waxaa intaa dheer, Waxaan doonayaa in aan si kor loogu qaado hawlaha loo fududeeyo doonaa iskaashiga ka dhexeeya ururada in industry, Dowladda iyo jaamacadaha. In si ay u ogaadaan qorshayaashaas, Jaamacadda ugu horeysay ku adkayn doonaa Dugsiyada Graduate in firfircoon galaan hormuudka ah ee nidaamo cusub oo waxbarasho oo ku jira maadooyinka ee dabiiciga ah iyo isku heer sare iyo maskax caalamiga ah labada.
Waxaan miiran weeraryahanka la aqoonyahano in ay gacan ka nabad iyo daryeelka bulshada oo dhan iyo Insi, sida ku qoran ee University of Tokyo Charter. In sidaa la yeelo, in marar casriga ah marka wajiga ee bulshada badalayaan heerka la dedejiyey, waxaa lagama maarmaan ah in ay qalabeeyaan nafteena la dabacsanaan si ay u jawaabto dalabka jeer, kuwaas oo. Iyadoo u hoggaansanaayeen adkaysatay in la doonayo in loo dhawray sida dhaqanka, dib u habaynta nidaamka oo dhan waa lagama maarmaan. Sida aan si adag adkayn horumarka ku saabsan dib u habaynta waxbarashada undergraduate ayaa hadda ka hor lagu fuliyay, Waxaan sidoo kale ka shaqeyn doonaan dhinaca dib u qiimaynta asaasiga ah ee Dugsiyada Graduate our, taas oo door weyn ee tababarka xirfadlayaal aqoon iyo abuurista qiimaha cusub. Isla mar ahaantaana, hirgelinta nidaamka maareynta shaqaalaha ah ka turjumaya sinaanta jinsiga, shaqeeya dadka dhalinyarada ah oo dheeraad ah, halka samaynta isticmaalka ugu wanaagsan ee awoodooda, iyo in ay taageertaa labada dhaqdhaqaaqa iyo xasiloonida waa hawl muhiimadda ugu sarraysa ii. Si horumar on habaynta waxay ka dhigi, waa in aan kor loo qaado heerka bulshada ee lagu aaminay ee sayniska iyo jaamacadaha. Aasaaskii of this isku halleeya waa la dhisay on fulinta dhamaystiran anshaxa cilmi-baarista iyo heerarka iyo sidoo kale sidii loo xoojin lahaa hawlaha in loo fududeeyo iskaashiga ka dhexeeya warshadaha iyo jaamacadaha, labadaas arrimood oo waa hawlo deg-deg ah in aan hadda wajahayaan.
By horumar leh noocyada kala duwan ee dib u habaynta, Waxaan doonayaa inaan ka dhigi University of Tokyo jaamacad in loo arkaa sida lagama maarmaan in ay dadka Japanese iyo in ay dunida oo dhan; University of Tokyo ah oo la jecel yahay oo dhan.
Arts oo Sciences
Humanities iyo Sociology
Law iyo Siyaasadda
Beeraha iyo Life Sciences
Science Information Technology iyo
Studies Information iskujir
Jaamacadda waxaa kiraysnaa dowladda Kacab ee 1877 ay magaca hadda by amalgamating dugsiyada dawlada ka weyn, waayo, daawo iyo waxbarasho Western. Waxaa la bedelay “ah Imperial University” in 1886, ka dibna Tokyo Imperial University in 1897 marka nidaamka University Imperial ee la abuuray. In September 1923, dhulgariir iyo dab socda halaagnay ku saabsan 700,000 Muga of Library Imperial Jaamacadda. The buugaag laga badiyay waxaa ka mid ahaa Library Hoshino ah , ururinta ah oo ku saabsan 10,000 buugaag. Buugaagta waxay ahaayeen hanti hore ee Hoshino Hisashi ka hor qayb ka mid ah maktabadda jaamacadda noqday oo ahaa inta badan ku saabsan falsafada Chinese iyo taariikhda.
In 1947, ka dib markii guuldarro Japan ee dagaalkii labaad ee dunida, waxaa dib loo qiyaasayey ay magaca asalka ah. Iyada oo bilowgii nidaamka cusub ee jaamacadda ee 1949, Todai liqeen School Higher hore First (maanta Komaba campus) iyo Higher Tokyo ee School hore, taas oo ka dambaysana wareegay waajib ku ah cilmiga ugu horeysay- iyo-sano labaad undergraduate, halka kulliyadood ku astronomical campus ugu weyn qaatay daryeelka ee saddexaad- iyo ardayda sanadka afraad-.
Inkastoo jaamacadda la aasaasay muddada Kacab ah, waxa uu leeyahay xididada horaantii Agency xiddigaha ugu , Shoheizaka Office Study , iyo Books Translation Agency Western ah. hay'adaha Kuwan waxaa xafiisyada dawladda la aasaasay by 徳 川 幕府 shogunate Tokugawa (1603-1867), oo door muhiim ah ka dhoofinta iyo turjumaad ah buugaagta ka Europe.
Kikuchi Dairoku, tiradaasi muhiim ah in waxbarashada dalka Japan, adeegay sidii madaxweynaha of Tokyo Imperial University.
Waayo, 1964 Summer Olympics, jaamacadda marti qaybtii socda dhacdada Pentathlon casri ah.
On 20 January 2012, Todai ku dhawaaqday in ay la iilanin lahaa bilowga sannad dugsiyeedka ay ka April si September si ay u waafajiyaan ay taariikheed ee heerka caalami ah. Isbedelka waxa loo joojinayaa lahaa in ka badan shan sano. Laakiin tani dhawaaqay gooni by Madaxweynaha la si xun u helay oo jaamacadda ka baxay qorshayaasha.
Sida laga soo xigtay Japan Times, jaamacadda lahaa 1,282 Professor bishii Febraayo 2012. Ee ah kuwa, 58 ay ahaayeen haween.
In dayrta ee 2012 oo markii ugu horeysay, Jaamacadda Tokyo bilaabay laba barnaamij undergraduate gebi baray in English iyo ku wajahan xagga ardayda caalamiga ah - Programs in English at Komaba (PEAK) - Barnaamijka Caalamiga ah ee Japan ee East Asia iyo Barnaamijka Caalamiga ah ee Sciences Environmental. In 2014, Dugsiga of Science ee Jaamacadda Tokyo soo bandhigay barnaamij kala iibsiga undergraduate dhan-Ingiriisi loo yaqaan Global Science Course (GSC).
Ma rabtaa wada hadlaan University of Tokyo ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: University of Tokyo rasmiga ah Facebook
University of dib u eegista Tokyo
Ku biir si ay ugala hadlaan of University of Tokyo.